Agromart | Agricultural Marketplace Nepal अदुवा खेती गर्ने तरिका – Agromart
अदुवा खेती गर्ने तरिका
Q 1. अदुवा खेतीका लागि कस्तो हावापानी आवश्यक पर्दछ ?
Q 2. अदुवा खेती समुद्र सतह देखि कति उचाईसम्म गर्न सकिन्छ ?
Q 3. अदुवा खेतीका लागि वार्षिक वर्षा कस्तो हुनु पर्दछ?
Q 4. अदुवा खेतीका लागि मोहडा कस्तो हुनु पर्दछ?
Q 5. अदुवा खेतीको लागि कस्तो माटो उपयुक्त हुन्छ ?
Q 6. नेपालमा अदुवा बालीका कुन–कुन जातहरु पाइन्छन् ?
Q 7. कपुरकोट अदुवा-१ जातको विशेषता के के छन् ?
Q 8. अदुवा खेतीको लागि जमिनको तयारी कसरी गरिन्छ ?
Q 9. अदुवा खेतीको लागि प्रति रोपनी अदुवाको बीउ कति लाग्दछ ?
Q 10. अदुवाको बीउको छनौट कसरी गरिन्छ ?
Q 11. अदुवाको बीउको उपचार किन गरिन्छ ?
Q 12. अदुवाको बीउको उपचार कसरी गरिन्छ ?
Q 13. अदुवाको बीउ कसरी रोपिन्छ?
Q 14. अदुवा खेती गर्दा मलखादको ब्यवस्थापन कसरी गरिन्छ ?
Q 15. अदुवा खेतीको लागि छापो राख्ने कार्य कतिको महत्वपूर्ण छर कसरी गरिन्छ ?
Q 16. अदुवा बालीमा गोडमेल किन र कसरी गर्नु पर्दछ ?
Q 17. अदुवा बालीमा सिंचाईकोआवश्यकता पर्दछ?
Q 18. अदुवा बालीमा ब्रुनी वा माउ निकाल्ने भनेको के हो?
Q 19. अदुवा बालीमा लाग्ने मुख्य–मुख्य कीराहरु कुन कुन हुन् ?
Q 20. अदुवा बालीमा लाग्ने गवारो कीराको नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ?
Q 21. अदुवा बालीको गाने औंसाको नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ?
Q 22. अदुवा बालीमा देखा पर्ने मुख्य मुख्य रोगहरु कुन कुन हुन् ?
Q 23. अदुवा बालीको गानो कुहिने रोगको नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ ?
Q 24. अदुवा बाली तयार भएको कसरी पत्ता लगाउने र प्रति रोपनी कतिसम्म उत्पादन हुने गर्दछ ?
Q 25. अदुवाको सरसफाई तथा ग्रेडिङ्ग कसरी गरिन्छ ?
Q 26. अदुवाको भण्डारण कसरी गर्न सकिन्छ ?
Q 27. सुठो भनेको के हो?
Q 28. सुठो कसरी बनाईन्छ?
Q 29. सुठोको भण्डारण कसरी गरिन्छ ?